ITunes मा त्रुटि २ fix कसरी समाधान गर्ने आईफोन समाचार
जब हामी अपडेट गर्न जाँदैछौं वा हाम्रो आईफोनलाई बहाल गर्नका लागि iTunes, अन्तिम कुरा हामी हेर्न चाहन्छौं एक त्रुटि सन्देश हो जुन हामीलाई स्थापनासँग जारी राख्नबाट रोक्दछ। त्यहाँ धेरै त्रुटिहरू छन् र केहि एप्पलको सर्भरहरू अधिक सहज हुने केही घण्टा कुञ्जीहरू सजिलैसँग समाधान गर्न सकिन्छ, जस्तै आईओएसको नयाँ संस्करणको सुरुवात दिनमा। तर त्यहाँ अन्य त्रुटिहरू पनि छन् जुन केहि बढी चिन्ताजनक छ, किनकि उनीहरूको मतलब हाम्रो आईफोन बिग्रिएको छ। यी त्रुटिहरू मध्ये एक हो त्रुटि 29.
हामी आइट्यून्स त्रुटि 29 देख्नेछौं जब त्यहाँ हुन्छ हार्डवेयर समस्याहरूया त तिनीहरू वास्तविक छन् वा प्रणालीले तिनीहरूलाई गलत पत्ता लगाइरहेको छ। अन्य त्रुटिहरू जुन हामीले हेर्नेछौं कि हार्डवेयरसँग पनि सम्बन्धित त्रुटिहरू हुन्: १,,, ११, १२, १,, १,, २०, २१, २,, २,, २,, २,,, 1,, 3,, 11 , ,०,, 12,, 13, १००२, १००14, १०११, १०१२, १०१16, १20 वा १21 23।।
1 ITunes मा त्रुटि २ fix कसरी तय गर्ने
1.1 तपाईंको कम्प्युटर सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस्
1.2 अर्को USB पोर्ट प्रयोग गर्नुहोस्
1.3 केबल खराब अवस्थामा छ
1.4 अर्को कम्प्युटर चलाएर हेर्नुहोस्
1.5 आईफोनबाट पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
1.6 एप्पललाई सम्पर्क गर्नुहोस्
तपाईंको कम्प्युटर सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस्
सबै चीजको काम गर्नको लागि क्रममा, हामीले सधैं यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि हामी सफ्टवेयरको पछिल्लो संस्करण प्रयोग गर्दैछौं त्यसैले तपाईं अवश्य iTunes अपडेट गर्नुहोस्। आइट्यून्सको मामलामा, यो सम्भव भएमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले हामीले गर्ने पहिलो कुरा भनेको म्याक अनुप्रयोग स्टोरमा जानुहोस र जाँच गर्नुहोस् कि यदि हामीसँग कुनै अद्यावधिक पेन्डिंग छ। यदि त्यहाँ कुनै छ भने, यो आईट्यून्सबाट नभए पनि हामी यसलाई स्थापना गर्छौं।
तार्किक रूपमा, यदि हामीसँग एक सुरक्षा प्रणाली छ, जस्तैaफायरवाल वा एन्टिभाइरस, हामीले यसलाई यस्तै कन्फिगर गर्नु पर्छ आईट्यून्सलाई कुराकानी गर्न अनुमति दिनुहोस् एप्पल सर्भरको साथ। यो तपाईं सबै आगमन र बहिर्गमन जडानहरूलाई अनुमति दिन हो।
अर्को USB पोर्ट प्रयोग गर्नुहोस्
यो मूर्ख देखिन्छ, तर यो, यो टाढाबाट छैन। कहिलेकाँही कारणको लागि, एक USB पोर्टले समस्या दिईरहेको छ र असफलता इशाराको साथ समाधान गरिएको छ बाहिर लिने जस्तो सरल अर्को पोर्टमा केबल राख्नुहोस्। मलाई थाहा छ कि यससँग यसको केहि गर्न सरोकार छैन, तर यो इशाराले मलाई मेरो आईप्याड जेलरोड गर्न अनुमति दियो। त्यस्तै आइट्यून्स संग हुन सक्छ।
केबल खराब अवस्थामा छ
अर्को सम्भावना यो छ कि हाम्रो केबल खराब अवस्थामा छ। यो आईफोनलाई चार्ज गर्न र आईट्यून्सको साथ सिnch्ख्रोनाइज गर्न सम्भव छ, तर यसलाई पुनर्स्थापित गर्न वा अपडेट गर्न सम्भव छैन किनकि यसले समस्या पत्ता लगाउँदछ। यदि तपाईंसँग छ भने अर्को केबल, प्रयास गर्नुहोस् कि यसले त्रुटि सुल्झाउछ कि भनेर।
अर्को कम्प्युटर चलाएर हेर्नुहोस्
अर्को चीज हामी गर्ने अर्को कम्प्यूटर को प्रयास गर्नु हो, त्यो हो जुन हामीलाई थाहा छ सहि कार्य गर्दछ, यदि सम्भव छ भने। यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो कम्प्युटर बिग्रिएको छ, तर हाम्रो आइट्युनहरू, हाम्रो आईफोन वा सबै चीज एकै समयमा एक समस्या पत्ता लगाउँदैछ कि तिनीहरूलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्दछ।
आईफोनबाट पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
यदि तपाईंले सबै कुरा प्रयास गर्नुभएको छ र 29 त्रुटि देखिरहनुभयो भने, तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ आईफोनबाट पुनःस्थापन गर्नुहोस्। यो तपाइँले गर्न सक्नुहुनेछ र यसैले हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौं कि हाम्रो आईफोनमा कुनै सफ्टवेयर समस्या छैन जुन हामीलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्दछ।
एप्पललाई सम्पर्क गर्नुहोस्
यदि माथिका कुनै पनि त्रुटि २ message सन्देश हराउने बनाउन सफल भएनन् भने एप्पललाई भेट्नुहोस् अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गर्न र तपाईंको आईफोन मर्मत गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » ITunes मा त्रुटि २ fix कसरी तय गर्ने
म यस पोष्टसँग धेरै असहमत छु, त्रुटि २ sole पूर्णतया र मात्र हो किनकि तपाईंले आफ्नो आईफोनमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुभएको छ र यो ब्याट्रीको APN मूल ब्याट्री भन्दा फरक छ, म भन्छु र मेरो आफ्नै अनुभवबाट पुष्टि गर्छु…।
माफ गर्नुहोस्, मैले पहिले नै आफ्नो आईफोन आईट्यून्स अपडेट गर्न सबै प्रयास गरिसकेका छन्, यसले मलाई यसलाई अन गर्न वा केहि गर्न अनुमति दिदैन। मेरो कम्प्युटरबाट यसलाई अपडेट गर्ने प्रयास गर्दा मैले १ error1671१ त्रुटि प्राप्त गरें र केहि प्रगति भएन ...
कसैले मलाई सहायता गर्न सकेको छैन।
मैले पहिले नै मेरो गोदको अपरेटिंग प्रणाली, र सबै विचाराधिन अपडेटहरू अपडेट गरिसकेका छन्।
म मेरो आईफोन पुनर्स्थापना गर्न चाहन्न किनकि म कहिले आफ्नो डेटा ब्याकअप गर्दिन र म यसलाई गुमाउन चाहन्न!
कृपया सहयोग गर्नुहोस् !!
यस क्षणमा आईफोनले आफैंलाई अपडेट गर्न केहि अधिक प्रयास गर्छ, जब यो अपडेट समाप्त हुँदैछ जस्तो देखिन्छ यसले मलाई त्रुटि २ 29 दिए!
यो के हुनेछ ????
त्यसोभए के हुन्छ समाधान ?? सहयोग !!!
मैले ब्याट्री परिवर्तन गरे, 🙁
अक्टूलाई जवाफ दिनुहोस्
परेरो कन्सुएलो भन्यो
नमस्कार! त्यो मलाई भयो, र यो समाधान हुन सक्दैन = ???? तपाईं यसलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्न ???
परेरो कन्सुएलोलाई जवाफ दिनुहोस्
म मेरो अनुभव वर्णन गर्दछु, अगस्त १ August, २०१ 19 मा मैले मेरो G 2016 जीबी आईफोन S एसको ब्याट्री परिवर्तन गरें। २4अगस्ट, days दिन पछि मैले आईओएसलाई 64 ..27. updated मा अपडेट गरें र यसले मलाई चोट पुर्यायो, आईट्यून्सले मलाई त्रुटि २ told बतायो, मैले यसलाई लिएँ I एप्पल स्टोर गए र एक दिउँसो पछि आईफोन fix एस फिक्स गर्न कोशिस गरे पछि तिनीहरूले मलाई यो फिर्ता दिए कि म नयाँ मदरबोर्ड समस्या थियो कि किन्न सक्छु, सेप्टेम्बर १ on मा र यो वेबसाइट पढेपछि, मैले आफ्नो आईफोन S एस खोले, सक्कली ब्याट्री जुन मलाई अझै पनी थाहा छैन किन र "voila" पहिलो पटक ITunes ले मेरो लागि यो अपडेट गर्‍यो र यो धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ। तपाईको टिप्पणीका लागि सबैलाई धन्यवाद। Xavi बाट अभिवादन।
Xavi Pérez लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, पिन्क्सो। तपाईंलाई थाहा छ, ब्याट्री हार्डवेयर हो। थप रूपमा, एप्पल समर्थन वेबसाइटमा यसले स्पष्ट रूपमा बताउँछ https://support.apple.com/es-es/HT204770 २ on मा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई हेर्नुहोस्।
पिन्क्सो सही नै हुनुपर्छ किनकि मैले ब्याट्री परिवर्तन गरें र फेरि जीवनमा ल्याउने एकमात्र तरीका यसमा मूल ब्याट्री राखेर थियो, जुन यद्यपि यो राम्रोसँग चार्ज भएन, मलाई यो खोल्न र एक नयाँ ब्याट्री राख्ने अनुमति दिईयो। पछाडि भित्र
एडेल क्रुज भन्यो
भर्खरै अर्को मूल ब्याट्री राख्नुहोस् जुन राम्रो छ जुन नक्कल होईन, एक भरपर्दो केबल र युएसबी पोर्टसँग एकैसाथ जडान गर्नुहोस्, आइट्युनहरूसँग पुनर्स्थापना गर्नुहोस् र भोइला समस्या समाधान गरियो 🙂
Adel Cruus लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद भाई म तिमीलाई हरामी माया गर्छु तपाई एक मास्टर हुनुहुन्छ धन्यवाद तपाईलाई मेरो आईफोन s एस रिकभर गर्न म सक्षम थिए म तिमीलाई माया गर्छु सुपर हरामी धन्यवाद एक अर्ब
एन्टोनियो गोमेज भन्यो
यस पोष्टका लागि धेरै धन्यबाद। वास्तवमा त्रुटि २aब्याट्री असफलताको कारण हो किनकि यो वास्तविक हो वा होईन, तर किनभने निश्चित ब्याट्रीले असफलता ल्याउँछ। यदि उसले तपाईंलाई दिन्छ भने, getण लिनुहोस् वा अर्को किन्नुहोस् र यो त्यस्तै हो।
एन्टोनियो गोमेजलाई जवाफ दिनुहोस्
जोस लाट्टुफ भन्यो
ठिकै छ, मसँग त्यो समस्या छ र यसले मेरो लागि काम गर्न चाहँदैन। ब्याट्री बदल्नुहोस् किनकि पुरानोले मलाई यो दिएका छ, मेरो बच्चा। मसँग अर्को ब्याट्री छैन। के यो एक मात्र समाधान छ?
जोस लाट्टुफलाई जवाफ दिनुहोस्
समान सेल मोडेलको मूल खोज्नुहोस् र त्यसले तपाईंलाई सेवा दिनेछ, तर वास्तवमा वास्तविक